October 10, 2007, 5:25 am Filed under: Articles ဒီစာမူကို သံလွင်အိပ်မက်မှာ စာရေးလေ့ရှိတဲ့ မမခရေဖြူက ပို့ပေးလာတာပါ ။ သဘောကျတဲ့ စာမူလေးဖြစ်တာမိုိ့ စာပြန်စီပြီး စာဖတ်သူများကို လက်ဆင့်ကမ်း ဝေမျှလိုက်ပါတယ်ရှင် .. ။ Aug လအတွင်း ဆန္ဒပြသတင်းများကို စတင်ကြားရသည် ။ မစုစုနွေး ၊ ကိုထင်ကျော်တို့ကို အတင်းဆွဲတွန်းထုတ် ရိုက်နှက်၍ လူစုခွဲသော် သတင်းရုပ်ပုံများကို မြင်ရ ကြားရသောအခါ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသော်လည်း “သတ္တိကတော့ မသေးဘူးဟေ့ ၊ ဘာလုပ်လို့မှ ဘာမှမဖြစ်တဲ့ တိုင်းပြည်မှာ သွားလုပ်နေတယ်”ဟု ဝေဖန်ခဲ့ပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့ ။ မည်သူမျှ အမိဝမ်းမှ ထွက်လာကတည်းက “နိုင်ငံရေး နိုင်ငံရေး”ဟု အော်ထွက်လာသည်ဟု မကြားဖူးပါ။ နိုင်ငံရေးလုပ်သူသည် သိပ္ပံပညာရှင်များကဲ့သို့ Born in talent လည်း မဟုတ်ကြပါ ။ မခံမရပ်နိုင်မှု ၊ အနစ်နာခံမှုများမှ ရပ်တည်မှု ခံယူချက်အဖြစ် ကူးပြောင်းသွားခြင်းသာ ဖြစ်ဧ။် ။ နအဖထောင်သည နေပျော်စရာကောင်းသည်ဟု တခါမျှ မကြားဖူးသောကြောင့် နိုင်ငံရေးကို popular ဖြစ်အောင်လုပ်၍ ထောင်ကျခံချင်သူများလည်း ရှိကြမည်မဟုတ်ပါ။ စိတ်မ၀င်စားသော သူများသည် နအဖလက်ထက်တွင် အထုတ်လိုက် အထည်လိုက် မျိုဆို့နေရသော မျက်စိနားများကို ပိတ်၍ ပါးစပ်နှင့်လက်သာ လှုပ်နေသည့် လူတန်းစားများ ဖြစ်ဧ်။ ကိုယ်တိုင်မပါဝင်ရဲသည့်တိုင် စိတ်ဝင်စားရမည် ။ အမှန်အမှား သိရမည် ။ မြန်မာပြည်သည် တို့တိုင်းပြည်ဖြစ်သည် ။ မလွှဲသာ၍ စွန့်ခွာခဲ့ရသော်လည်း ကျွန်မတို့သွေးများသည် မြန်မာ့သွေးများဖြစ်ပါဧ။် ထို့ကြောင့် “နိုင်ငံရေး စိတ်မ၀င်စား”ဟု ပြောမည်ဆိုလျှင် ငါဘယ်လိုလူစားမျိုး ဖြစ်သွားမည်လဲဟု အရင်စဉ်းစားသင့်သည် ။ ယခုရက်စက်ပစ်သတ်ရိုက်နှက်ခံနေရသော လူထုထဲတွင် သင့်မိဘ ညီအကိုမောင်နှမ ၊ သင့်ချစ်သူသာပါမည်ဆိုလျှင် “နိုင်ငံရေး စိတ်မ၀င်စားဘူး”ဟု သင်ဆက်၍ ပြောနိုင်မည်လော။
Hi Lin Let,I think I spelled your name correctly and address in right way.Anyway I do appreiciate your effort,gesture and the patriotic spirit for Burma.Accumulating protests may bring good future,freedom and unbiased justice.I wish bloodthirsty Junta is going to stop bloodstreaming in Burma and hope People of Burma may get peace and tranquil as well as those who gave their lives for freedom.May wish all of us achieve the FREEDOM soon. I like to be your friend as well.I think you may get contact through mail or may be personally.It shall be alright as we both are girls who were born in the same year.If you would not mind to be my friend,feel free to mail me.Actually I searched for your e-mail address on your blog.Unfortunately, I could not find that out.Pardon me for my carelessness.
Comment by nwayoopyo
October 11, 2007 @ 1:18 am Reply	Thank You, Nwayoophyo.
I also like to be your friend as we were born in same year. That’s good we are same age🙂.
October 11, 2007 @ 7:53 am Reply	လင်းလက်ရေ..သာမာန် နိုင်ငံသားတယောက်က သူ့နိုင်ငံအတွက် သူလဲ ပါဝင်သက်ဆိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အမြင်မို့ အားပေးလေးစားပါတယ်။အဲလို မျိုးဆက်သစ်တွေကို ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ တော်လှန်ရေးက ရရှိလိုက်ပါတယ်..ဒါဟာ နအဖတွေအတွက် ရှုံးနိမ့်သွားမှုတွေထဲက တခုပါပဲ..မကြာမီကာလမှာ တို့တိုင်းပြည်ကို တို့တွေ ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ ဆုံကြရဦးမှာ မလွဲပါ…
October 11, 2007 @ 4:13 pm Reply	အဲဒီစာကို ရေးတဲ့ ခရေဖြူကို လေးစားတယ်။ ပြန်လည်မျှဝေပေးတဲ့ လင်းလက်ကို ကျေးဇူးတင်တယ်။
October 11, 2007 @ 10:32 pm Reply	ခင်ဗျားတို့ ရေးတာတွေအားလုံးက သူတို့ ကို ပြန်ပြောချင်နေတာနဲ့ တထပ်တည်းကျနေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးဗျာ..ဒီလူတွေ.. သူတို့ အမှားထောက်ပြရင် ခြိမ်းခြောက်သလို လုပ်တာ နိုင်ငံရပ်ခြားထိဆိုတော့ လွန်လွန်းတယ်..
October 15, 2007 @ 3:19 pm Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI